Samsung SMS Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka ka Samsung Devices .
> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka ka Samsung Devices
Ma dooneysaa inaad ogaato qarsoon wax yar ka ninkaaga / xaaskaaga? Ma doonaysaa in aad ka warbixin xun loo badbaadiyo caruurtaada? Ama doonayaa inaan u soo ceshano u gaar ah farriimaha aad tirtiray ku saabsan qalabka Samsung? No arrinta sababta aad u rabto inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka ah tirtiray ka qalab Samsung, waxaa jira hab. Iyada oo ah qalab Samsung soo kabashada fariin, waxa aad heli kartaa ceshan fariimaha qoraalka ah tirtiray ka Samsung oo aan ka kaaftoomi.
Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha SMS ka Samsung
First of dhan, aad u hesho barnaamijka SMS Samsung ah: Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) . Waa software ka soo kabashada fariin ugu horeysay ee qalabka Samsung oo adduunka ah. Sidaa darteed, waxa uu noqon karaa fursad weyn oo aad u. Sidaa daraadeed, waxaad si fudud u soo kaban karto xogta tirtiray ka qalab Samsung, ay ka mid yihiin fariimaha, xiriirada, sawiro iyo video. Geedi socodka oo dhan soo kabashada aad qaadataa oo keliya dhowr daqiiqadood.
Download version maxkamad free of this software Samsung soo kabashada fariin hoos ku qoran:
Fiiro gaar ah: Fadlan hubi Samsung model qalab iyo OS ee Android halkan ka hor inta aadan u qabtaan soo kabashada. Ma aha in dhamaan qalabka Samsung waxaa lagu hadda oo ay taageerayaan Wondershare Dr.Fone for Android.
Tallaabada 1. Isku qalab Samsung in kombiyuutarka
Orod Wondershare Dr.Fone for Android ka dib markii aad ka soo dejisan oo ku xidh aad kombuutarka, oo aad arki doonaa suuqa kala aasaasiga ah ee hoose. Markaas xiriiriyaan qalab Samsung in kombiyuutarka oo taga si aad tallaabada xigta.
Tallaabada 2. sahlo debugging USB ku saabsan qalabka Samsung
Scan ka hor, waxaad u baahan tahay inaad awood debugging USB aad Samsung. Haddii aadan ka hor inta aadan samayn, waxaad heli doontaa daaqad hoos ku qoran, oo aad u baahan tahay in ay raacaan tilmaanta in ay hadda sameeyaan. Haddii aad sameeyey, aad u boodi doonaa si toos ah.
Tallaabada 3. Falanqeeyaan oo baarista Samsung aalad farriimaha la tirtiro
Marka aad hesho halkan, riix "Start" button on suuqa kala hoose si aad ha barnaamijka falanqeeyaan qalab aad ka hor iskaanka. Ka hor waxa ay samaynayaan, hubi in batteriga qalabka waa in ka badan 20% eedeeyay.
Next, waxaad u baahan tahay inaad u soo jeeso Samsung qalab ee shaashadda ka dib markii falanqayn ay ka badan tahay. Guji "ogolow" si ay awood Codsiga Superuser ah. Markaas dib si aad u computer, oo guji "Start" ee suuqa kala barnaamijka si ay u bilaabaan baaritaan ah.
Tallaabada 4. Kulanka Xiisaha Leh ceshan fariimaha qoraalka ah ee la tirtiro qalabka Samsung
Waxaad u baahan tahay in ay xoogaa waqti ah ku qaataan skaanka. Dabadiisna, aad arki doonaa fariimo recoverable ee qaybta ka ah "Fariin". Hubi waxyaabaha ku Caddaynay mid mid u fiirso waxa aad rabto. Markaasuu iyaga u dhoofiyaan si aad u computer adigoo gujinaya "Ladnaansho". Waxaad ka akhrisan kartaa fariimaha ee qaabka HTML on your computer hadda.
Fiiro gaar ah: Dhab ahaantii, fariimaha laga helay natiijada scan ka mid ah kuwa la tirtiro dhawaan (font orange) iyo kuwa kuwa hadda jira (font madow). Haddii aad rabto in aad dib kaliya kuwa la tirtiro, aad u kala sooci karaa iyada oo la isticmaalayo tab ku xusan: bandhigaan waxyaabaha tirtiray oo keliya.
Download version maxkamad free of this software Samsung soo kabashada fariin qoraal hoos ku qoran: